लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको १५औं स्थापना दिवस
लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले १५औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । लुम्बिनीमा शनिबार एक कार्यक्रम गरी स्थापना दिवसमा मनाइएको हो । विश्व विद्यालयको वार्षिकोत्सवमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बौद्धदर्शनलाई बहुविषयमा जोडेर अध्यापन गर्नुपर्ने बताए । ‘बुद्ध शिक्षा धर्म र दर्शनमा मात्रै सीमित हुनुहुँदैन, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विषयमा यसलाई जोडेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ’, उनले भने ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले बौद्ध विश्वविद्यालयबाट बौद्ध क्षेत्रको अनुसन्धान कार्य सुरु गर्न आग्रह गरे । अनुसन्धानका लागि आवश्यक स्रोत प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने भन्दै उनले विद्यार्थीलाई अनुसन्धानमा जोड्नुपर्ने उनले बताए । लुम्बिनीसहित यस क्षेत्रका बौद्ध स्थल, पुरातत्व तथा संस्कृतिको अनुसन्धान नै नभएको भन्दै उनले विदेशी व्यक्तिको पुस्तकमा मात्रै भर पर्नुपर्ने बाध्यता हटाउनुपर्ने बताए ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले लुम्बिनी गुरुयोजना समयमै सकेर थप परिष्कृत गुरुयोजना कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने बताए । लुम्बिनीलाई विश्व शान्ति क्षेत्र र आध्यात्मिक केन्द्र बनाउनका लागि भवन ठड्याएर मात्रै नहुने भन्दै प्रकृतिको संरक्षणमा लाग्नुपर्ने उनले बताए । लुम्बिनीलाई सुन्दर बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले बृक्षरोपणमा ध्यान दिएको भन्दै नया कार्यक्रम बनाएर ल्याउन लुम्बिनी विकास कोषलाई आग्रह गरे । कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सदस्य फखुरुद्धिन खानले बौद्ध विश्वविद्यालयले लुम्बिनीलाई नै केन्द्रमा राखेर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । हरेक संस्थाहरुले लुम्बिनीलाई छाडेर सहरकेन्द्री कार्यक्रम गर्ने गरेको गुनासो समेत गरे । उनले लुम्बिनीलाई संस्कृतिमय बनाउनका लागि पर्खाल बाहिरको समूदायलाई जोडेर कार्यक्रम गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
लुम्बिनीको विश्वशान्ति नगर गुरुयोजना तयार गरेका कोरियन प्रोफेसर क्वाकले शान्तिको उद्गम क्षेत्र लुम्बिनी भएको बताए । लुम्बिनीलाई साच्चिकै शान्तिमय बनाउनका लागि यहाको प्रकृतिको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले विश्व शान्ति नगर बनाउने आफ्नो सपनालाई कार्यान्वयन गर्न समेत आग्रह गरे । त्यस्तै लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष अवदेश कुमार त्रिपाठीले बौद्ध शिक्षालाई समाजसंग जोडेर विश्वविद्यालयले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । बौद्ध शिक्षामा चिकित्सकीय पद्धती रहेको भन्दै त्यसलाई उपयोग गर्न सकिने उनले बताए ।
लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. हृदयरत्न बज्राचार्यले विश्वविद्यालयले शैक्षिक कार्यक्रमको विस्तारमा निरन्तर जोड दिएको बताए । त्यस्तै बौद्ध विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. तिलकराम आचार्यले पाच वर्षको अवधीमा धेरै शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार गर्न सकिएको बताए । सोही अवसरमा विश्वविद्यालयको अनुसन्धान केन्द्रको शिलान्यास गरिएको छ । लुम्बिनी विकास कोष परिसरमा अनुसन्धान भवन बन्न लागेको हो । जसको लागत २० करोड रहेको छ । सो भवनको मुख्यमन्त्री पोखरेलले शिलान्यास गरेका छन् ।